Fiantsonan’ny taxiborosy : Ho vita tsy ho ela -
AccueilRaharaham-pirenenaFiantsonan’ny taxiborosy : Ho vita tsy ho ela
Efa ny 70 isan-jaton’ ny asa izay tanterahina amin’ny fiantsonan’ny taxiborosy etsy Andohatapenaka izao no vita raha ny fanazavana azo avy amin’ ireo teknisianina manatanteraka ny asa, nandritra ny fitsidihan’ny minisitry eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika misahana ny tetikasan’ ny Filoha sy ny fanajariana ny tany Benjamina Ramanantsoa omaly. Fivoahana voalohany izay notanterahin’ny minisitra taorian’ny nanendrena azy ity, ary avy hatrany dia ny fitsidihana ny asa vita toa ny Ravinala Airports eny Ivato , ny fiantsonan’ny taxiborosy etsy Andohatapenaka sy Ambohimanambola, izay tafiditra indrindra anatin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena ireo. Raha hiverenana kely ny mahakasika ny asa etsy Andohatapenaka dia ny volana desambra ho avy izao no eritreretina fa hamitana ny fotodrafitrasa , ary efa hiditra amin’ ny famaramparanana toa ny fametahana varavarana sy ny fanatsarana , na ilay antsoina hoe ‘’finition’’ ny orinasa manatanteraka ny asa amin’ izao fotoana izao. Anisan’ny ezaka hotanterahina kosa indray izao dia ny fifampiresahana amin’ ireo kaoperativa izay hampiasa ny fiantsonana, ary manaraka izahy ihany koa ny fijerena ny orinasa izay hitantana io fiantsonana etsy Andohatapenaka io. Raha tsiahivina dia misy ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina, na ilay antsoina hoe ‘’3P’’ izao nahavita ny ezaka goavana izao izay ny orinasa ‘’Total’’ no miara-miasa amin’ izany. Mahazaka olona hatrany amin’ny 64 000 ity fotodrafitrasa ity, ary kaoperativa 64 no hampiasa izany, ka hatrany amin’ny fiara 80 no hiantsona hitatitra olona .
Faritra tsy azo hanorenana ihany koa moa ny manamamorona iny reniranon’ i Ikopa iny , ary hilana fandalinana ny asa izay tanterahina eny an-toerana. Noho izany, ireo trano mihorina sy toeram-pivarotana manodidina io toby fiantsonana io dia tsy manara-dalàna avokoa, ary tsy manana fahazon-dalana hoy ny talen’ny fanajariana ny tany. Mba ialana amin’ ny zava-mitranga toa ny eny amin’ny fasan’ny karana, izay lasa trano tsy manara-dalàna no manodidina ny fiantsoanana . Anio dia anio dia hisy ny fandraisana andraikitra, ka hisy ny fametrahana takelaka mampatsiahy ny manodidina fa faritra tsy azo hanorenana eny an-toerana, ka tsy tokony hisy ireo mpivarotra manodidina sy izay voalazan’ny lalàna. Manoloana ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa ireo, dia nilaza ny minisitra misahana ny tetikasan’ny Filoha sy ny fanajariana ny tany, Benjamina Ramanantsoa fa “betsaka ny filana amin’ny tsenan’ny fotodrafitrasa lehibe, na ny asa goavana eto Madagasikara, noho izany dia ezahina ny fanamorana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpamatsy vola’’ hoy izy. Ato ho ato dia betsaka ny asa izay hotanterahina araka ny nambaran’ny minisitra Benjamina Ramanantsoa hatrany “satria isika dia manenjika ny asa goavana izay tsy vitan’ny hafa tany aloha mba ho lovan’ny taranaka’’. Anisan’ny asa izay efa hojerena ato ho ato ohatra ny mikasika ny lalam-by izay mampitohy an’i Fianarantsoa-Toliara, Fianarantsoa-Antsirabe, jerena amin’izany ihany koa ny fanamboarana lalamby vaovao araka ny fanazavany. Mikasika izay fotodrafitrasa izay ihany dia efa mandeha ny fijerena miaraka amin’ ny firenena marokanina ny tetikasa lakandranon’ i Pangalana. Tanjona hoy ny minisitra ny hanana firenena matanjaka sy firenena mandroso, koa ireo seha-piariana rehetra ireo dia hojerena avokoa, ary miaraka amin’izany ny fotodrafitrasa mifandraika amin’ny filana .